Ukuba sicinywa okungafunwayo ekufeni? | Apg29
Ndifanele bajeziswe ngokufa enomdintsi?
Ngoku bhala incwadi yam yesibini ebizwa "The engafunwayo". Imalunga ebuntwaneni bam, indlela engamenywanga weza kweli hlabathi.
Ndixelelwe kum ukuba mna ngaphezulu okanye ngaphantsi kodlwengulo. Oko ndikutsho kuni encwadini yam olandelayo, okungafunwa. Ngaba I like engafunwayo kuphindezelwa ukufa isisu?
Ukuba ugula okanye, ukuba mna isigwebo sokufa njengoko abangafunwayo 'ukubulawa'?
Siyabona ukuba abantwana, abagulayo abadala uhlala eyingozi. Bangakwazi njalo abulawe kuba bengengabo ngokwaneleyo enqwenelekayo okanye zexabiso. Mhlawumbi ke ubuzicingele oku okanye umntu uthe kungenjalo.
abanye abahlobo ukuba ebonisa nxamnye isisu, ngoko umntu phezulu waza wathi: "Ukuba Abayi kudana!" Ukuba ndineentloni ebomini nokuphatha? ayibanga njani inokutyhefeka le nto? Lowo uya kuba neentloni nguye owathi kuyo.
Intombi yam eneminyaka eli-13 ubudala maxa wambi uye izinto ezinzulu. Wathi: "Xa wazalwa mna, ndandineminyaka iinyanga ezilithoba ubudala, kodwa kwenzeka njani ukuba kwathabatha unyaka phambi kugubha lwam lokuzalwa lokuqala Bekuya Walinda nje iinyanga ezintathu?!"
iinyanga 9 + 3 = 1?
Nibe iinyanga ezilithoba phambi kokuba uzalwe kwakho. Kwiinyanga ezisithoba, kwakukho ubomi bomntu esiswini sikamama wakho ukuba wena. Ngaba ubomi enjalo isisu kwaye abulawe?
Andibanga lula ebomini, kodwa mna ndiya kakhulu kuvuya wazalwa! Emihle bonke: ndifumene ithuba ukuya kwiminyaka 20 kufumana uYesu Kristu! Emva koko wazalwa okwesibini waza waba ebomini bam!
Kusenokwenzeka ukuba mna engafunwayo ngabantu, kodwa mna ezinqwenelekayo nguThixo!
Xa kwazalwa intombi yam, yena igama Umnqweno. Kuyinto French ukuba ezinqwenelekayo. Waye bobabini enqwenelwa nomfazi wam yaye mna - wacela nguThixo!